Ndị ọkachamara na mpempe akwụkwọ akọwapụtara ọnọdụ dị iche iche na ntinetịime Web
Ụlọ ọrụ ntanetị weebụ enwewo nnukwu mgbanwe, gbanweeihe ndị dị mkpa na 2016. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị ahịa na-achọ ihe ọhụrụ ngwaahịa,ejikọta ha na oke arụmọrụ. Ya mere, usoro nke 2016 aghọwo agadi n'oge 2017.
Afọ iri na ise gara aga, ebe a na-etinyere na GIF n'ihu n'ihuA na-ejikarị ya eme ihe - retrato fondo. Otú ọ dị, a chụpụrụ àgwà ndị a mgbe ndị ọrụ na - enweghị ike iji ngwọta ndị a.Mmetụta n'ụzọ dị irè nke ihe ntanetị weebụ na-emetụta mmetụta nke azụmahịa. Dị ka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ nweremalitere na mmalite nke okirikiri a na-acha uhie uhie agaghị emezu ihe mgbaru ọsọ ya dị ka ọnụego nke mgbanwe na ọnụ ọgụgụ kachasị mmandebanye aha.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ikpochapụ ọchịchọ imewe weebụ adịghị anọgide na-enweghị ntụpọ. Onye ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Max Bell na-enye ndepụta nke ọnọdụ na-emepụta atụmatụ weebụ na ọchịchọ, nke ndị na-emepụta weebụ ga-ewepụ.Otú ọ dị, a pụrụ itinye usoro ndị a ka ejiri mee ihe n'oge ọ bụla.
Ụdị ndebanye aha na tọn ozi
Ụdị ndebanye aha nyere ndị ọbịa aka ịdenye aha gị, nke na-abawanyeọnụego mgbanwe..Jiri ụdị dị iche iche iji zere ndị ọbịa. Na mgbakwunye, tụlee ịjụ maka ihe dị mkpa naanị. Naiji ụdị ndebanye aha ndị dị mfe nghọta ma dị mfe imejupụta bụ ike siri ike, Otú ọ dị, ọ nwere ike iwepụ nke aafọ n'ihi na abụrụ na imewe weebụ.
A na-atụ aro ka ịchọta ọtụtụ ozi na ọdịda gịiji dọta mmasị ndị ọbịa gị. Ọhụụ gị kwesịrị inwe nkọwa doro anya nke ọdịnaya gị. Na nso nso aekwu okwu na-agbanwe agbanwe.
Ntuzi nke mmapụta
N'okọta ụlọ ọrụ weebụ, a na-ejikarị emepụta pop-elu iji kwalite ọdịnaya naiji mee ka a mata ihe omuma. Pop-elu nwere ọnụ ala ntọghata dịka a na-ewere ha iwe. I nwere ike ikpebi ịbụmmapụta gbasiri ike ma dị mma. Ma mmapụta nwere ike ịpụ na ahịa n'afọ a nakwa yana ọchịchọ weebụ ndị ọzọna ahịa. A ghaghị ijide elu-igwe ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ n'ọdịnihu.
Ndị na-enyefe peeji nke ihu
Ịmepụta nhazi ntanetị na saịtị gị bụ ezigbo echiche.Ndị ọbịa na-eji ngwaọrụ mkpanaaka na-eche ọtụtụ nsogbu mgbe ha na-agbalị ịnwagharịa na ibe weebụ. N'ọtụtụ n'imeikpe, ọ bụghị peeji mbụ nke nwere ozi kachasị mkpa.
Ọtụtụ ntanetịime weebụ ga-apụ n'afọ a. Ntinye weebụa ghaghị ijide usoro dịka anyị nwere ike iji mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị mgbe e mesịrị na iji uru ndị a mee ihe.